Hal sano oo ka soo wareegatay geeridii Daniel Arap Moi | Star FM
Home Wararka Kenya Hal sano oo ka soo wareegatay geeridii Daniel Arap Moi
Hal sano oo ka soo wareegatay geeridii Daniel Arap Moi
Waxaa maanta hal sano laga joogaa taarikhdii uu geeriyooday madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee Kenya Daniel Toroitich Arap Moi .
4-tii bishii labaad ee sanadkii hore ayuu Moi geeriyooday.
Waxaa uu wadanka hoggaaminayay 24 sano laga soo billaabo 1978-dii ilaa 2002-dii.
Xaflad lagu xusuusanaya waxqabadkiisi ayaa maanta lagu qabanayaan deegaanka Kabarak ee ismaamulka Nakuru waxaana munaasabaddaas ka qayb galaya mas’uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta .
Madaxweynihii labaad ee dalka ayaa lagu xusuustaa hal-qabsiga nabad, jaceyl iyo midnimo.
Previous articleDHAGEYSO:Milatariga Soomaaliya oo ka hadlay dagalkii ka dhacay Gobolka Hiiraan
Next articleWasiirka arrimaha gudaha oo la kulmay madaxda Mandera